Bakhaylnimo Ayay Isaga Furtay Ninkeeda! - Xogside
Home BARNAAMIJYADA Bakhaylnimo Ayay Isaga Furtay Ninkeeda!
Gabadh u dhalatay Imaaraadka Carabta yaa maxkamadda ka codsatay in laga furo ninkeeda. Gabadhan ayaa ku eedaysay in aanu haba yaraatee siin daryeel dhaqaale oo ku filan isla markaana uu yahay nin aad u gacan adag oo bakhayl ah.
Gabadhan ayaa sheegtay in muddo 20 sanadood ah ay wada joogeen hasa yeeshee ay intaasi u sabraysay balse uu ka soo rayn waayay. Maxkamadda ayaa gabadha weydiisay in mushaharka uu qaata yar yahay sidaa awgeedna aanu waxba ka hagran, laakiin waxay ugu jawaabtay inay iyaduba markii hore moodaysay inuu qaato mushahar yar laakiin hadda ay ogaatay inuu qaato mushahar aad u badan.
Maxkamadda ayaa ninkaasi u yeedhay sababta uu qoyskiisa u siin waayay dhaqaale ku filan madaama uu heli karo, waxase uu ugu jawaabay in aanu mushaharkiisu sidaa u badnayn. Maxkamadda aya dabagal ku samaysay waxaana la ogaaday inuu qaato mushahar gaadhaya 75 kun Dirham bishii, taasina ay tahay mid aad u badan.
Maxkamadda ayaa intaasi ka dib go’aamisay inu laga furo gabahdhaasi isla marakaana biil ka badan kuu uu siin jiray intii ay wada joogeen inuu bixiyo ku xukuntay. Bakhaylku had iyo jeer dhib ayuu isu keenaa..
Previous articleXidhiidhka Xusuusta Iyo Huradada Ka Dhexeeya!
Next articleKhudaartu Waa Mid Aad Qaali U Ah Sida Dahabka!